Dhacdooyinka | Waxbarshada Beesha Minnetonka
Waxbarashada Beesha ee Minnetonka waxay abaabushaa dhacdooyin badan sanad walba. Kumanaan kaqeybgalayaashu waxay ka yimaadaan gobolkayaga deegaanka iyo metro. Intaa waxaa sii dheer, dhacdooyinka Firecracker iyo Tour de Tonka waxay leeyihiin racfaan dalka oo dhan ah. Sannadihii ugu dambeeyay, wadayaal iyo orodyahanno ayaa ka kala yimid 30 Gobol labadan dhacdo. Marka laga hadlayo Tour de Tonka, kaliya 15 sano wadayaasha ayaa kaqeyb qaatay 42 Gobol.
Khamiis, May 6, 2021
Sabti, May 15, 2021
Axad, July 4, 2021
Sabti, July 10, 2021
Sabti, Ogosto 7, 2021
Axad, Sebtember 26, 2021
Waxbarshada Beesha ee Minnetonka waxay leedahay dhowr munaasabadood oo waawayn kuwaas oo aqbala kafaalaqaadyada sanad kasta iyo sannad kasta. Sannadlaha Tonka Youth Triathlon ee bisha Maajo, Firecracker Run on July 4 th iyo Tour de Tonka baaskiil sabtida ugu horreysa ee Agoosto.
Qaar badan oo ka mid ah ganacsiyada maxalliga ah iyo kuwa waddaniga ah iyo shirkadaha waxay u arkaan qiimaha ay la leedahay iskaashiga Minnetonka Waxbarashada Bulshada maadaama ay taageerayaan mid ka mid ah dhacdooyinkan caanka ah ee bulshada. Haddii aad jeclaan lahayd inaad waxbadan ka ogaato kafaala qaadista dhacdo MCE ah, fadlan la xiriir Agaasimaha Fulinta ee Waxbarashada Beesha Minnetonka, Tim Litfin . Mahadsanid.